Stationery "Iphepha lemisakazo namakhukhi" - uPalermo
Isitolo sezinto zokubhala
Isitolo sezindawo zokubhala ezinesimanga esiyinkulungwane ...
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-12)
Isikere nekhadi lePipi eVia Cesare Terranova 3 a Palermo kuyinto egcwele kahle Isitolo sezinto zokubhala okunezinhlobonhlobo eziningi zezinto zesikole nezehhovisi, Supplies Party, Balloons kanye Amakhandlela Ukwakhiwa.
Isikhungo sezinto zokubhala zamaphepha nama-Candies ePalermo - Gcwalisa isikole nehhovisi!
La Isikhungo sephepha lemishini kanye namakhandlela inikeza Ukukhetha okubanzi kwemikhiqizo engcono kakhulu yesikole neyehhovisi, ekhethwe kakhulu ukufeza izidingo zabafundi abancane nabasebenzi. Izisebenzi ze Isitolo sezinto zokubhala, ngenxa yekhono layo nobungcweti, kuzokusiza kakhulu ukubhekana nokuthengiwe kwakho. Izikhwama zesikole kanye ne-kindergarten, amabhokisi okudla kwasemini, izikhala zokubhala, izincwadi zokubhala, amapeni, amapeni, abahleli, amapensela, ama-eraser, ama-albhamu, ama-wokubala, amabala nokunye okuningi onakho Isitolo sezinto zokubhala nokunikelwayo okuningi unyaka wonke kususelwa kwiphakheji ekhethiwe!
Isikhululo sePhepha lama Stationery kanye namakhekhe ePalermo - imihlobiso eyizihlobiso
Isikere nekhadi lePipi eVia Cesare Terranova 3 a Palermo inikeza isipiliyoni, ubuchwepheshe kanye nokuthinta ngobuqili ekukhetheni nasekufezekiseni Izinto zephathi e Ukuqalwa kwamabhaluni namakhukhi maqondana nokuthandayo, kungaba kwendabuko noma kubehaba ngokweqile. Lapho Isikhungo sephepha lemishini kanye namakhandlela uyaqaphela Ukuqalwa kwamabhaluni namakhukhi egcizelele ngokusho okuthandayo. Amakhekhe amakhekhe, imihlobiso yetafula, amabhaluni kaMinnie noMickey Mouse nokunye okuningi akulindele nje!
Isikhungo se-Stationery Paper kanye namakhandlela ePalermo - Okokuzijabulisa kwabancane
Esitolo Isikere nekhadi lePipi uzothola amathoyizi amaningi azothokozisa izingane zakho, okubandakanya onodoli abaphefumulelwe ama-cartoon heroines, amathoyizi athambile, ukwakhiwa, iphazili yeClementine nokunye okuningi… Isitolo sezinto zokubhala Isikere nekhadi lePipi di Palermo Yindawo ekahle yokuthola isipho sangempela futhi esingalokothi sinqande noma ucabange abangane noma izihlobo. Zivumele uhendwe Isikhungo sephepha lemishini kanye namakhandlela!
Isikhungo se-Stationery Paper kanye namakesi ePalermo - Ikhona lobumnandi
Isikere nekhadi lePipi eVia Cesare Terranova 3 a Palermo yindawo yomhlangano yabathandi bezikhathi zobumnandi. Ngaphandle kwalokho Ukuqalwa kwamabhaluni namakhukhi, lo Isikhungo sephepha lemishini kanye namakhandlela eqinisweni litholakala phakathi nonyaka Izinto zephathi njengamashokolethi oSuku lweValentine nazo zonke ezinye izikhathi ezikhethekile, amaqanda ama-Easter entwasahlobo kanye nezinye izibiliboco ezinjengama-gummy candies kanye nama-marshmallows ngaso sonke isikhathi! Yini enye oyifunayo? Zama Isikhungo sephepha lemishini kanye namakhandlela a Palermo.
Ikheli: I-Via Cesare Terranova, engu-3
I-POSTAL CODE: 90131
Ucingo: 091 9741669
Umakhala ekhukhwini: 392 6172662
Yefeksi: 091 9741669
Iwebhusayithi: www., sithuthucweb.com
Inombolo ye-VAT: 06337670829